Muqdisho: Al Shabaab oo Xalay Goob Xaflad Aroos ah Ka Socotay Ku Weeraray Bombaanooyin Khasaaro Dhaliyay(Hadhwanaagnews) Friday, October 19, 2012 Muqdisho-(HWN)- xaflad aroos ah oo xalay ka socotay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Warshada Caanaha Muqdisho-(HWN)- Xaflad aroos ah oo xalay ka socotay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Warshada Caanaha ee degmada Hodan ayaa lagu weeraray bob gacmeed khasaaro kala duwan dhalisay.
Dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa xaflada arooska ayaa warbaahinta u sheegay in xaflada arooska ay aheyd mid si aad loo buuxa dadkuna ay baadhi ama music ciyaarayeen balse mar qura laga war helay bom gacmeed gudaha arooska lagu soo tuuray taasi oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac kala duwan.
Inta la ogyahay 3 ruux ayaa ku geeriyotay
inkastoo wararka ay sheegayaan in ay dadka dhintay gaarayaan ilaa iyo 5 ruux waxaana sidoo kale dhaawacyo ka soo gaaray ilaa iyo sakaal ruux oo kale.
Qaraxaan xalay lagu weeraary goobta xaflada arooska gudaha Muqdisho ayay dadka ku eedeynayaan kooxda Al Shabaab hayee shee aysan jirin sheegasho dadkii qaraxaasi ka dambeeyay waxaana goobtii aroos ay noqotay meel lagu kala cararay.
Durba markii uu qarax dhacay waxaa goobta soo gaaray gawaarida Ambulasta oo Muqdisho si xowli ah ugu shaqeysa waxaana halkaasi laga qaaday dadkii dhaawacyada ka soo gaaray bom gacmeed gacmeed xalay lagu weerray xaflada arooska.
Hadaba wixii war ah ee ka soo kordhaa dhibaatadii xalay ka dhacday goobta xaflada arooska waxaad kala socon doontaan Shabakada caalamiag ah ee hadhwanaagnews.com Xasankuuriya
xasankuuriya@yahoo.com <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Friendly Link